Imboni Ephakathi Yezibulala-zinambuzane | I-China Pesticide Intermediate Manufacturers, Suppliers
Inombolo ye-CAS: 118289-55-7
I-EINECS Inombolo: 118289-55-7
Uhlobo:I-Agrochemical Intermediates, Dyestuff Intermediates, Flavour & Fragrance Intermediates, Pharmaceutical Intermediates, Syntheses Material Intermediates
Inombolo Model: 118289-55-7
I-Dichlormid ingathuthukisa ukumelana kommbila kuma-thiocarbamate herbicides. Kuyisivikelo esikhethekile sokuvikela ummbila ekulimazeni ummbila nge-dimethyl ne-acetochlor.
I-Pyrazolopyroxypyr iyisivikelo esisha eyamenyezelwa yi-Brighton Plant Protection Association ngo-1999. Ingasetshenziswa kanye neminye imithi yokubulala ukhula ukuvikela izitshalo ezifana nokolweni nebhali ekulimaleni.
I-LAMBDA CYHALTHRIN ACID, CAS 72748-35-7
I-LAMBDA CYHALTHRIN ACID ingesinye sezithako ezibalulekile ze-pyrethroid insecticides, ezingasetshenziswa ukwenza ama-pyrethroids asebenzayo.
Isetshenziswa kakhulu njengesivikelo semithi yokubulala ukhula njenge-alachlor, i-acetochlor, i-chloramphenicol ne-EPTC. Isetshenziswa ikakhulukazi njenge-
i-ejenti yokuphepha ye-acetochlor namanye ama-amide herbicides ukuvimbela nokulawula ukhiye. Ngokuvamile, umthamo ungama-3-5%. Kungaba njalo
ukushisisa futhi kuxubene ne-acetochlor.
I-Methylbentonitic acid iyingxenye ebalulekile ye-pyrethroids, engakhiqiza i-diclofenac ne-triflurothrin ukukhiqiza ama-pyrethroids afana ne-permetrin, i-cypermethrin ne-cyhalothrin. Isibonelo, indlela entsha yokwenziwa ye-pyrethroid-permethrin iwukwengeza i-3,3- dimethyl-4,6 nge-methyl bentonitic acid njengento eluhlaza kanye ne-ferrous chloride njengesiqalisi ohlelweni oluvaliwe lwe-Chemicalbook.